Mihaona amin'ny ekipa - Tarehimarika
mora ny paiso frezy miaraka amin'ny frezy frezy
zavatra hatao amin'ny hena fajita
fomba fanamboarana lefona pickles nendasina
inona no atsoboka amin'ny crème marikivy
buffalo wild wing spinach artichoke milentika
Mandany vola amin'ny peni
Salama, Holly aho ary tsy afaka nientanentana kokoa nampahafantatra anao ny ekipanay mahatalanjona! Manana mpikambana ekipa manan-talenta sy be fandavan-tena isika izay manampy amin'ny fihazonana ity bilaogy ity isan'andro sy isan'andro! Eo anelanelan'ny media sosialy, fampiroboroboana, talenta mamorona mahavariana, famoronana resipeo ary fakana sary an-tsary ireo vehivavy ireo dia samy mitaona sy mampitolagaga ahy isan'andro!
(Bebe kokoa momba Holly eto …)
MPITARIKA MEDIA SOSIALY & BLOG MANAGER
Kristen no mpitantana ny haino aman-jery sosialy sy bilaoginay ary ampahany lehibe amin'ny Spend With Pennies! Mandany ora maro tsy hita isa izy amin'ny fijerena isan'andro ny fikirakirana ny bilaogy, hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra ary manara-maso ny fandaharam-potoanan'ny media sosialy.
Candace dia nianatra fitiavana fitiavana sy sakafo avy amin'ny reniny sy ny renibeny. Niasa tamin'ny CFO nahomby tamina orinasam-barotra miroborobo, Candace dia mitantana ny sehatry ny fandraharahana amin'ny Spend With Pennies.
Miaraka amin'ny faniriana fatratra amin'ny sakafo i Candace dia tia manendasa sy mahandro. Ny fiaraha-misakafo hariva dia hetsika mahazatra ao an-tranony! Tian'i Candace ny manandrana fomba fahandro vaovao ary mamaky boky sy pejin-tranonkala mahandro hahita hevitra vaovao hifangaro amin'ireo tiany indrindra. Miaraka amin'ny zazavavy kely sy zazalahy kely, dia eo ambony latabatra foana ny karazany!
Mpanampy mpanampy amin'ny famokarana
Donnalea dia efa naman'i Holly nandritra ny taona maro ary izy izao no Production Assistant ary tonian-dahatsoratry ny Spend With Pennies. Ho fanampin'ny fanampiana amin'ny famokarana horonantsary sy sakafo, Donnaleatia mahandro sy mampiala voly ny namana sy ny fianakaviana. Izy dia mandany ora fanampiny amin'ny fananany amin'ny farihy miaraka amin'ny vadiny, zanany lahy sy vavy roa. Tiany ny manandrana fomba fahandro vaovao ary manova izany ho an'ireo mpihinana fussy 3! Ao an-tranony, 'ny sakafo dia mahatonga ny toe-po' ka ny fitadiavana fomba mahaliana sy mahafinaritra dia ilaina!
EDITOR & ADMINISTRATORA mpanampy
Sam dia administratera manam-pahaizana ary mitazona ny ekipa tsy hiala amin'ny lalana! Vady, mama alika, ary tia mandany fotoana any ivelany.
Miasa mafy i Gaja hitazomana antsika amin'ny làlan'ny Spend With Pennies, miaraka amin'ny fanitsiana, fitantananana ary ny kaonty ihany koa! Manana zazavavy kely telo mahafinaritra izy ary vady be fitiavana.
Ankoatry ny fanoratana sy ny fanitsiana amin'ny Spend With Pennies, Bailey dia mankafy fitsangatsanganana, fanaovana sarimihetsika ary mahandro fomba fahandro vaovao ho an'ny namany sy ny fianakaviany.
Ashley dia mpampianatra amin'ny lisea lasa mpamaham-bolongana niova sakafo ary renin'ny zazavavy tsara tarehy 3. Tiany ny mamorona ao an-dakozia ary tsy tia manaraka ny The Rules foana. Ashley dia mizara kôkôla ny lovia lehibe indrindra mahasalama, ny mofo voaendy, ny tsindrin-tsakafo mihasimba ary mino ny hankafy ny sakafo rehetra tianao amin'ny antonony, ary indraindray tsy misy). Afaka mahita an'i Ashley ao amin'ny Ilay mpikomy momba ny resipeo .
FITSIDIHANA Ilay mpikomy momba ny resipeo